4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > 4-Amino-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 402927-97-3 အမျိုးအစား: သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ
4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
ထုတ်ကုန်အမည် 1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin
IUPAC name ကို 1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin
1- (methylsulfonyl) -4-piperidinamine
1- (methylsulfonyl) -4-piperidylamine
2 ။ 1- (methylsulfonyl) piperidine-4-Amin
1- (methylsulfonyl) piperidine-4-Amin, aldrichcpr
3 ။ 1-methanesulfonylpiperidine-4-Amin
5 ။ 1-methylsulfonylpiperidine-4-Amin
6 ။ 402927-97-3
7 ။ 4-အမိုင်နို-1- (methanesulfonyl) piperidine
8 ။ 4-အမိုင်နို-1- (methylsulfonyl) piperidine
9 ။ 4-အမိုင်နို-1-methanesulfonylpiperidine
4-အမိုင်နို-n-1- (methylsulfonyl) piperidine
10 ။ 4-အမိုင်နို-N ကို-1-methylsulfonylpiperidine
4-Piperidinamine, 1- (methylsulfonyl) -
Canonical မှအပြုံးများ CS (= အို) (= အို) N1CCC (CC1) N ကို
Inchi သော့ချက် FLQSRSQNICPZIH-UHFFFAOYSA-
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 4-Amino-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3)
APICMO မှာ 1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin
အမြောက်အမြားအတွက်ဖန်တီးထုတ်လုပ်နေသည်။ APICMO မှာအားလုံးထုတ်ကုန် CGMP ၏ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်
အဆိုပါထုတ်ကုန်မွှေးကြိုင်, Metabolite & အညစ်အကြေး, Heterocycles, intermediate, Fine ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆေးဝါးများ၏အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ
အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) ဓာတုနှင့်ကာယဂုဏ်သတ္တိများ
4-အမိုင်နို-1-methanesulfonylpiperidine တစ်ဦးအစိုင်အခဲ form မှာတည်ရှိ
4-အမိုင်နို-1-methanesulfonylpiperidine အစိုဓာတ်, သဟဇာတပစ္စည်းများအဖြစ်ပိုလျှံအပူမှ reactive ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအခြေအနေများမှ exposure ဓာတု၏ပြိုကွဲဖြစ်ပေါ်စေသည်
4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) computing ဂုဏ်သတ္တိများ
အိုင်ဆိုတုပ်အက်တမ်၏ count 0
undefined နှောင်ကြိုး၏စတီရီယိုစင်တာရေတွက် 0
undefined အက်တမ်၏ Stereocenter ရေတွက် 0
သတ်မှတ်ထားသောအက်တမ်၏ Stereocenter ရေတွက် 0
မိုးသည်းထန်စွာအက်တမ်၏ count 11
ဝင်း canonicalized သလဲ? ဟုတ်ကဲ့
Xlogp3-AA ကို -0.9
အမှန်တကယ်အစုလိုက်အပြုံလိုက် 178.078 g / mol
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် 178.078 g / mol
topological ဝင်ရိုးစွန်း၏မျက်နှာပြင်ဧရိယာ 71.8 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ Aaadccbjmabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaa
Rotate နှောင်ကြိုးများ၏အရေအတွက် 1
ဟိုက်ဒရိုဂျင် receptor နှောင်ကြိုးများ၏အရေအတွက် 4
မော်လီကျူးအလေးချိန် 178.25 g / mol
1- ၏မသင့်လျော်ကိုင်တွယ် (Methanesulfonyl) piperidin-4-Amin ၏အန္တရာယ်
တငျထားကိုင်တွယ်လျှင် 1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin လူ့ health.it အချို့အန္တရာယ်များနိုင်တယ်သုတေသီဖို့လိုအပ်အန္တရာယ်များကိုရှောင်ကြဉ်ရန်စောင့်ရှောက်မှုတွေအများကြီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ခံရဖို့ထို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်
ဓာတုပစ္စည်းများကိုင်တွယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ကောင်းစွာလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဖို့ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤတွင် mishandled ဓာတု occurif စေခြင်းငှါ၎င်းအန္တရာယ်အချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin ကိုင်တွယ်စဉ်
1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin ၏ကိုင်တွယ်မှု၌, တဦးတည်းကအမြဲတမ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစောငျ့ရှောကျသငျ့သညျ:
ဓာတုကိုင်တွယ်နေချိန်တွင်အစားအစာများ, အချိုရည်, ဒါမှမဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်တာကိုရှောင်ကြဉ်ပါ
ညစ်ညမ်းလျှင်အဝတ် Remove, နောက်တဖန်သူတို့ကိုမသုံးမီကသူတို့ကိုရှင်းလင်း
သငျသညျ 1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin အသုံးမပြုတဲ့အခါသေချာအောက်ပါဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံနောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်:
ကွန်တိန်နာတင်းကျပ်စွာ corked ရပါမည်
သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ် 1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်များမှအခမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်, သင်ကာကွယ်မှုများအတွက်မှန်ကန်သောပစ္စည်းကိရိယာများရှိသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသီးအသီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်နေပါသည်။ အောက်ပါပစ္စည်းကိရိယာများသင်တို့အဘို့ထောက်ခံချက်များဖြစ်ပါသည်:
မျက်နှာကိုကာကွယ်ပေးရန် -Use မျက်နှာအစောင့်
-Approved respiration ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောခါးစညျးရှေ့ဖုံးအဖြစ် -Wear အကာအကွယ်အဝတ်အစားတွေ
4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) ပထမအကူအညီအစီအမံ
with1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမဆိုအန္တရာယ်များကိုဘယ်အချိန်မဆိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအန္တရာယ်များဆိုးရွားသောကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုလက္ခဏာများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ပထမဦးဆုံးအကူအညီပထမဦးဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ အောက်ပါသင်အမြဲမတော်တဆမှု၏အမှု၌စဉ်းစားသင့်သောပထမဦးဆုံးအကူအညီလုပျထုံးလုပျနညျးဖြစ်ကြသည်။
ပိုးရွရှင်းလင်းဖို့ -Use ရေ
ရောဂါ၏ဇွဲ၏အမှု၌ -Seek ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကို
persistent လက္ခဏာတွေ၏အမှု၌ -Seek ဆေးဝါးအကူအညီ
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆယ်မိနစ်များအတွက်မျက်စိသန့်ရှင်းရေးမှရေအေး၏ -Use ပဒေသာ
ရေနှင့်အတူမျက်ခမ်းနှင့် flush ဖွင့်လှစ်ရန်လက်ချောင်းများအမှီ -Use ။
4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) တည်ငြိမ်ရေးနှင့် reactivity ကို
1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin အခန်းအပူချိန်မှာတည်ငြိမ်
အဆိုပါဓာတုအစိုဓာတ်, သဟဇာတပစ္စည်းများအဖြစ်ပိုလျှံအပူမှ reactive ဖြစ်ပါတယ်။
1- (Methanesulfonyl) piperidine-4-Amin ၎င်း၏အလယ်တန်းဓာတုပစ္စည်းသို့မဟုတ်အရောအနှောကိုအခြားဓာတုပစ္စည်းများဖမ်းမိမီးနှင့်အတူ, နည်းလမ်းများ extinguishing အောက်ပါမီးကိုသုံးပါရှိရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာတော့
4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) သိုလှောင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း
အဆိုပါဓာတုအဖြစ်ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားအန္တရာယ် s ကိုအများအပြားရှိပါတယ်။ သို့ဖြစ်. အကြီးအစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။ Authorized ကြီးကြပ်ရေးမှူးဓာတုများ၏ကိုင်တွယ်ကြီးကြပ်သင့်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံသိပ္ပံပညာရှင်များသုတေသန, ဘဝသိပ္ပံ, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ဓာတုပေါင်းစပ်, analysis နှင့် Chromatography ပါဝင်သောအားလုံးဒေသများရှိတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နှင့်အလွန်ကောင်းနေတယ်။
4-Amino-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) bulk အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
ဒီထုတ်ကုန်သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဓာတုပေါင်းစပ်ဘို့တင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအမြောက်အများ၌ဤထုတ်ကုန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်အမိန့်စေရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ၏အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, Pubchem 4-အမိုင်နို-1-Methanesulfonylpiperidine (402927-97-3) ကဏ္ဍများ 1-10 ။
Friedrich Konrad Beilstein, Reiner Luckenbach, Springer-Verlag, 1988 - ဓာတုဗေဒ, အော်ဂဲနစ်, စာမျက်နှာ 7-9 ။
Lokesh Bhattacharyya, ဂျက်ဖရီအက်စ် Rohrer, ဆေးဝါးနှင့်ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များ, စာမျက်နှာ 5-8 များအတွက် Ion Chromatography ၏ Applications ကို။